SomaliaReport: Indoniishiya oo Dishay 4 Burcad Badeed
Ciidamada dagaalka badda ee dawladda Indonesiya ayaa dilay afar budhcad badeed oo ka sii dagayey markab nooca xamuulka qaada ahaa oo u afduunaa ka dib markii madax-furasho loo dhigay sabtidii markabka dushiisa, sidaana waxaa sheegay afhayeenka hawlgallada Milatari.
Admiral Iskander Sitompul yaa sheegay inay budhcad-badeeddu isaga tageen markabka iyaga oo koox koox ah, ka dibna ay ciidamada Milatarigu ka daba tageen kooxdii u danbaysay ee ka sii dagaysay markabka kuwaasoo ahaa ilaa afar.
“Markii la hubsaday inuu sugan yahay amaanka la haystayaasha ayey koox unugteena ka mid ahayd kana koobnayd 12 qof oo ay weheliso dayuuradaha qumaatiga u kaca ayaa baacsaday kooxdii u danbaysay budhcad-badeedda, xabadoo ayaa la is dhaafsaday, waxaana u suurogashay milatarigeenu inay dilaan dhamaan kooxdii budhcad badeedda ahayd”.
Markabka iyo rakaabkii saarnaaba waxaa ilaalinayey maraakiibta dagaalka ee Indonisiya ilaa shaqaalihii markabka loo wada qaaday dalkooda ayuu raaciyey.
Markabkan oo laga lahaa dalka Indonisiya iyo 20kii shaqaale ee la socdayba waxaa laga afduubtay jasiiradda Socotra o ilaa 320 mile waqoyiga abri kaga beegan dhul xeebeedka Soomaaliya bishii March 16keedii sida laga soo xigtay xoogagga ka hortagga budhcad-badeedda ee midawga yurub oo marka la soo gaabiyana loo yaqaan NAVFOR.
Markabka MV Sinar Kudus oo u sii jeeday dhanka Egypt kana soo shiraacday waddanka Singabuur markii la afduubay ayaa lo isticmaalay mid maraakiib kale oo nooca xamuulka qaada ah laga soo qaaday weerar fashilmay.
Mid ka mid ah budhcad badeedda ayaa u sheegay saxaafadda Reuter in markabka laga bixiyey madaxfurasho gaadhaysa 4.5 Milyan, hase yeeshee mulkiilaha markabkan ayaa ku tilmaamay qiimahaa mid aan sax ahayn.